4G-SDI အထောက်အပံ့ဖြင့် Magewell သင်္ဘော Dual-Channel 12K Capture Card | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » 4G-SDI ပံ့ပိုးမှုနှင့်အတူ Magewell သင်္ဘော dual-Channel ကို 12K Capture အ Card ကို
4G-SDI ပံ့ပိုးမှုနှင့်အတူ Magewell သင်္ဘော dual-Channel ကို 12K Capture အ Card ကို
Pro ကို Capture Dual-SDI 4K Plus အားပြင်သာပြောင်းသာ Single-link ကို 4G-SDI, Dual-link ကို 60G-SDI သို့မဟုတ် Quad-link ကို 12G-SDI interfaces ကနေအပြည့်အဝ 6fps မှာ 3K ဗီဒီယိုနှစ်ခုတစ်ပြိုင်နက်လိုင်းများဖမ်းယူ
ဧပြီလ 29, 2019 - နန်ကျင်း, တရုတ်: key ကိုစျေးကွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း addressing ကိုယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောဖြေရှင်းချက်ပို့၎င်း၏အစဉ်အလာကိုဆက်လက်, Magewell ယနေ့က၎င်း၏အသစ်က၏ချက်ချင်းရရှိနိုင်မှုထုတ်ပြန်ကြေညာ Pro ကို Capture အ Dual-SDI 4K Plus အား ဗွီဒီယိုနဲ့အသံဖမ်းကဒ်။ ပြီးခဲ့သည့်လကကတည်းကသင်္ဘောတင်ခ, သစ်ကိုမော်ဒယ်ဘက်စုံ, စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ထိရောက်မှုတစ်ခုခြွင်းချက်ပေါင်းစပ်ပေး Dual-ရုပ်သံလိုင်းဖမ်းယူသိပ်သည်းဆနှင့်အတူမျိုးစုံ 4K SDI interface ကိုစံချိန်စံညွှန်းများအဘို့အပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ထောက်ခံမှုပေါင်းစပ်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီအမြင့်မား-ကောင်းချီးအခြားအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူကမီးမောင်းထိုးပြပါလိမ့်မယ် Pro ကို Capture အ InfoComm 205 (ဇွန်လ 7-8, Orlando တွင်ဖလော်ရီဒါ) မှာလာမည့်လွှမီဒီယာအရှေ့ညီလာခံ (မေ 2407-2019 နယူးယောက်စီးတီး) မှာတဲ 12 အတွက် PCI Express ဗီဒီယိုရိုက်ဟာ့ဒ်ဝဲ၏မိသားစုနှင့်တဲ 14 ။
အဆိုပါ Pro ကို Capture အ Dual-SDI 4K Plus အား 4K ဗီဒီယိုကို Single-link ကို 60G-SDI, Dual-link ကို 12G-SDI သို့မဟုတ် Quad-link ကို 6G-SDI ဆက်သွယ်မှုကျော်တစ်စက္ကန့်အပြည့်အဝ3ဘောင်မှာဖမ်းယူ။ single-link ကို, 12Gb / s ကို SDI အရင်းအမြစ်နှုန်းရုံတစျခု cable ကိုသုံးပြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ် 4K သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတစ်ခုကြော့ဖြေရှင်းချက်ပေးပါသည်, ဒါပေမယ့်အများကြီး 4K ထုတ်ကုန်နေဆဲသာ Quad-link ကိုသို့မဟုတ် Dual-link ကိုဆက်သွယ်မှုကိုဆက်ကပ်။ အားလုံးသုံးနည်းလမ်းများ, အများအတွက်ထောက်ခံမှုနှင့်အတူ Pro ကို Capture အ Dual-SDI 4K Plus အား ကဒ်နောက်ဆုံးပေါ်အဆိုပါနှစ်ထက်လည်းစောသော 4K ဗိသုကာနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူ Compatibility ကိုပေးပါသည်။
အဆိုပါ Pro ကို Capture အ Dual-SDI 4K Plus အား အဆိုပါ 4096 × 2160 အပါအဝင်4× 3840 2160K ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံသတ်မှတ်ချက်မှတက်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှာဗီဒီယိုချန်နယ်နှစ်ခု, ဖမ်းယူ က Ultra HD (UHD) TV ကိုစံ။ နှစ်ဦးစလုံးသွင်းအားစုလွတ်လပ်သောဆုံးဖြတ်ချက်တွေ, ဘောင်နှုန်း, အပြောင်းအလဲနဲ့ settings ကိုနှင့် SDI ဆက်သွယ်မှုစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူတစ်ပြိုင်တည်းသုံးနိုင်တယ်။ တစ်ခုချင်းစီကို input ကိုအရင်းအမြစ် - ဗီဒီယိုနှင့် SDI-embedded အသံအပါအဝင် - တစ်ဦးချင်းစီအစီအစဉ်အတွက်ကွဲပြားဖမ်းယူ parameters တွေကိုနှင့်အတူနောက်တဖန်, အပြိုင်အတွက်မျိုးစုံဆော့ဖျဝဲ application များမှရှုံးစေနိုင်သည်။
အဆိုပါ Pro ကို Capture အ Dual-SDI 4K Plus အား Third-party software များအဘို့ CPU ကိုရရှိနိုင်မှုပူးတွဲတင်ပြထား, အိမ်ရှင် system ရဲ့ CPU ကိုပေါ်သုညသက်ရောက်မှုနှင့်အတူကဒ်၏ On-board ကို FPGA တက် / ဆင်း / Cross-ပြောင်းလဲခြင်း, image ကိုချိန်ညှိခြင်းနှင့်ဂရပ်ဖစ်ပြသမှုအပါအဝင်အရည်အသွေးမြင့်, 10-bit မှာကဗီဒီယိုအပြောင်းအလဲနဲ့လုပ်ဆောင်တယ်။ , တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လုပ်မှု, ပူးပေါင်းဆောင်ကို web conferencing, ဟောပြောပွဲဖမ်းမိ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပုံရိပ်နှင့် virtual reality (VR) ဖန်ဆင်းခြင်း software ကို streaming, လူကြိုက်များ encoding ကနှင့်အတူကျယ်ပြန့်လိုက်ဖက်တဲ့ကမ်းလှမ်းနေချိန်မှာ Magewell ရဲ့စကွဝဠာ Pro ကို Capture အ drivers တွေကို Windows, Mac နှင့် Linux operating systems ထောက်ခံပါတယ်။
Magewell ရဲ့ပြည့်စုံ SDK ကိုတိုက်ရိုက်ထုံးစံဆော့ဖျဝဲ application များနှင့် turnkey ဖြေရှင်းချက်ထဲမှာ devices များအပြည့်အဝအဆင့်မြင့် feature ကို set ကိုမူတည်ပြီးမှ Third-party developer များဖွနေစဉ်။ အကွိမျမြားစှာ 4K Pro ကို Capture အကဒ်များကိုနောက်ထပ် Multi-ရုပ်သံလိုင်းဖမ်းယူသိပ်သည်းဆတိုးမြှင့်ဖို့တူညီသော system ထဲမှာတစ်ပြိုင်နက်သုံးနိုငျ
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Single-ရုပ်သံလိုင်း 4K SDI ကတ်များ၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဆက်သွယ်မှုစနစ်များပေါင်းစည်းအတူရေပန်းစားအင်္ဂါရပ်ခဲ့ပြီး OEM မိတ်ဖက်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏ Compatibility ကိုတိုးမြှင့်ဖို့လို က Ultra HD အရင်းအမြစ်ပစ္စည်းကိရိယာများအဖြစ်အမြဲ 12G-SDI ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးကြောင်းကိရိယာများအမျိုးအစားများရောနှော အသုံးပြု. ထုတ်လုပ်မှုကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ, "မေီ Zhou, Magewell မှာအရောင်းဒါရိုက်တာကဆိုသည်။ "ကျနော်တို့ကမျိုးစုံ 4K သတင်းရင်းမြစ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ဖောက်သည်များအတွက်ထူးချွန်ဖမ်းယူသိပ်သည်းဆပေး, dual-ရုပ်သံလိုင်းဖွဲ့စည်းမှုပုံစံအတွက်တူညီတဲ့အကျိုးခံစားခွင့်ကမ်းလှမ်းရန်ကျေနပ်ပါ။ "
Magewell အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.magewell.com.
Magewell အကြောင်း - 2011, Magewell (ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သောwww.magewell.com) ဒီဇိုင်းများနှင့်ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖမ်း, အပြောင်းအလဲနဲ့, streaming များနှင့်ပလေးအောက်အဘို့အဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ စဉ်ဆက်မပြတ်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၏အခြေခံမူလမ်းညွှန်နှင့်ထူးချွန်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုပေးနှင့်အတူ, Magewell က၎င်း၏ဖြေရှင်းချက်၏ခြွင်းချက်အရည်အသွေး, စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတွက်အားကြီးသောဂုဏ်သတင်းရရှိထားပြီးပါပြီ။ တကမ္ဘာလုံးဖြန့်ဝေ, Magewell ထုတ်ကုန်တိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ် streaming, ထုတ်လွှင့်, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပုံရိပ်, ဟောပြောပွဲဖမ်းမိ, စောင့်ကြည့်, video conferencing, ဂိမ်းနှင့်ပိုပြီးအပါအဝင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဗီဒီယိုက applications တွေကိုအသုံးပြုကြသည်။
ဆက်သွယ်ရေး Turn ရေးရန်
Write ပြန်လာဆက်သွယ်ရေးအားဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်ရေးသားချက်များ (အားလုံးကြည့်ရှု)
Magewell သည် Mac SDK အားဆုရသော Video Capture Solutions အတွက်ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည် - ဇွန်လ 23, 2020
StreamGear သည် VidiMo Live Streaming Production Solution အတွက် Coveted Award ဆုကိုဂုဏ်ပြုသည် - ဇွန်လ 4, 2020
Ultra Stream Encoders များတွင် Magewell သည်အသံလွှင့်ခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်လွှင့်ခြင်းစွမ်းရည်များကိုချဲ့ထွင်သည် - မေလ 26, 2020
12G 4K အသံလွှင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဖမ်းဆီး Magewell oem ထုတ်လုပ်မှု ပရော်ဖက်ရှင်နယ် AV စနစ် SDI SDK ကို လွှ UHD က Ultra HD က Ultra HD ဖိုရမ် ultraHD ဗီဒီယိုကို Capture အ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် virtual reality 2019-04-29
နောက်တစ်ခု: မီးဖိုထဲက Group မှ DaVinci ဖြေရှင်းရန်စတူဒီယိုနှင့်အတူဂလိုဘယ်ချဲ့ Continues